🥇 accounting of amazinyo
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 550
Oda ukubalwa kwezimali kwamazinyo
Imitholampilo yamazinyo nemitholampilo yamazinyo kuvulwa yonke indawo. Ngamunye wabo unohlu lwakhe lwamakhasimende akhetha isikhungo esithile ngokuya ngendawo yomsebenzi, indawo yokuhlala, kanye nohlu lwezinsizakalo ezinikeziwe, inqubomgomo yamanani nezinye izinto eziningi. Ukubalwa kwamakhasimende kumazinyo kuyinkqubo enzima kakhulu futhi edla isikhathi. Kuyadingeka hhayi kuphela ukugcina nokuvuselela imininingwane yokuxhumana ngesikhathi esifanele, kepha nokulandelela umlando wezokwelapha wekhasimende ngalinye, kanye nokugcina imibhalo eminingi yokubika okuyimpoqo nokwangaphakathi. Njengoba amazinyo ekhula, kanye nezinqubo zokukhiqiza zamazinyo, ukubalwa kwamakhasimende esikhungweni samazinyo nakho kuyathuthuka. Ngenhlanhla, intuthuko yezobuchwepheshe nemakethe yezinsizakalo zezokwelapha zihlale zihambisana. Odokotela bamazinyo manje sebekwazi ukukhohlwa ngesidingo sokuchitha isikhathi esiningi nsuku zonke begcwalisa amafomu nemibhalo ehlukahlukene, ngokugcina ngesandla amakhadi amakhasimende kanye nomlando wabo wezokwelapha. Manje ama-automated accounting system wokuphathwa kwamazinyo angabenzela wona. Kuze kube manje, ukusetshenziswa kwe-USU-Soft kwe-accounting yamazinyo sekuzibonakalise ngendlela enhle. Iyanqoba ngokushesha imakethe yamazwe amaningi. Inzuzo enkulu yokusetshenziswa kokubalwa kwamazinyo uma kuqhathaniswa nama-analogs yikhwalithi yayo ephezulu, ukuthembeka nokusebenziseka kalula.
Abaphathi nabasizi bavame ukukhokhelwa ngokuya ngamahora abasebenza ngawo - amahora noma amashifu. Uhlelo lwe-USU-Soft lwe-accounting yamazinyo lunesikhathi nesikhathi sokubakhona esivumela umphathi wamazinyo ukuthi agcine ithrekhi yokuthi abasebenzi beza nini emsebenzini nokuthi baphuma nini emsebenzini. Ukuze sikwazi ukugcina isikhathi, xhumana nethimba lethu losekelo lobuchwepheshe. Uma wenza lokhu, kufanele uthathe isinqumo khona manjalo ukuthi ufuna ukufaka isikhathi nokuba khona kanye nokugcinwa kwesikhathi. Uhlelo lwe-USU-Soft lwe-accounting yamazinyo lukuvumela ukuthi uhlole izinhlobo ezahlukahlukene zemisebenzi eyenziwa ngabasebenzi ngezindlela ezahlukahlukene. Ukugcina amarekhodi akho aphulukisa iziguli ngekhompyutha kuqinisekisa ukuthi imininingwane ephathelene nokwelashwa kweklayenti, eqoqwe ngokuphelele endaweni eyodwa, ayilahleki ndawo, futhi inkinga yokubhalwa ngesandla okungafundeki odokotela bamazinyo ixazululwa ngokuphelele. Odokotela bamazinyo abelapha iklayenti, kanye nodokotela omkhulu wamazinyo, okwazi ukufinyelela kuwo wonke amakhadi, bazohlala bekwazi ukuthola ngokushesha imininingwane abanentshisekelo kuyo.
Gcina i-logbook yokwelashwa kwamakhasimende. Ngemuva kokwelapha isiguli, udokotela wenza irekhodi ku-logbook yomlando wesiguli ukufaka imininingwane ngokuqokwa kwangaphambilini. Udokotela udinga ukucacisa amazinyo asebenze nawo bese egcwalisa izinkambu 'Ukuxilongwa', 'Izikhalazo', 'Anamnesis', 'Inhloso', 'Ukwelashwa', 'Izincomo' (uma kunesidingo, ungangeza eminye imikhakha noma susa okungadingekile). Umlando wecala ungagcwaliswa hhayi kuphela udokotela wamazinyo, kepha futhi nganoma yisiphi isisebenzi esinikezwe ilungelo lokufinyelela lokuhlela amarekhodi angaphandle eziguli zabanye abasebenzi. Ngokuzenzakalelayo, udokotela ongenalo leli lungelo lokufinyelela angadala kuphela futhi ahlele imilando yamacala eziguli zakhe.
Ukubiza iziguli yingxenye ebalulekile yomsebenzi womlawuli. Ungabhala umyalezo onemininingwane mayelana nokuqokwa ohlelweni lokubalwa kwamazinyo bese uwuthumela eqenjini labantu, bese ushayela lezo ziguli ezingawutholanga umyalezo. Lokhu kuyasiza uma ungenaso isikhathi sokushaya izingcingo noma amazinyo aneziguli eziningi kakhulu. Chofoza inkinobho ethi 'Thumela i-SMS' ngenhla kohlu lweziguli bese kuvela iwindi elivelayo nohlu oluphelele lwemilayezo elindele ukuthunyelwa. Ungabona iziguli imilayezo yazo ethunyelwe, futhi ungazifihla ukuze ubone labo imiyalezo engakahanjiswa kubo. Uma isiguli singakakuqinisekisi ukuqokwa kwaso, ungahlela kabusha noma ukhansele ukuqokwa ngqo ohlelweni lokubalwa kwamazinyo. Ukuthola ngokushesha amakhadi eziguli futhi uwanikeze amahhovisi odokotela, izici zohlelo lokusebenza lwe-accounting zisiza kakhulu. Qhafaza kwesokudla osukwini olufunayo kukhalenda bese ukhetha 'Phrinta lonke uhlu lwama-aphoyintimenti ngosuku'. Ukuhlelwa kwe-alfabhethi kusetshenziselwa ukuthola amakhadi asefayeleni lephepha ngamagama; ukuhlunga ngezihlalo zamazinyo kusetshenziselwa ukusabalalisa amakhadi emahhovisi, ukuze isiguli esinqunyelwe ukubekwa ngaso isikhathi sokuqala sibe phezulu kwenqwaba yamaphepha.
Uma ungagcini amakhadi wephepha ngokulandelana kwe-alfabhethi, udinga ukushintsha izinketho zokuphrinta ohlwini lokuqokwa kosuku. Ukwenza lokhu, umsebenzi onendima 'yoMqondisi' noma omunye umsebenzi onemvume yokushintsha izifanekiso zamadokhumenti kufanele aye ku-'Izilungiselelo ',' Izifanekiso zedokhumenti ', athole' Ukuqokwa: Iziguli zabo bonke odokotela osukwini 'bese ushintsha ukuhlunga ngegama ukuhlunga ngenombolo yerekhodi lezokwelapha noma ukuqokwa kokugcina.
Izinzuzo zohlelo lwe-USU-Soft lwe-accounting yamazinyo ziyazikhulumela. Ijubane lomsebenzi kudokotela wakho wamazinyo nakanjani lizosheshiswa kakhulu, kanye nokunemba komsebenzi nokuxhumana ngqo namakhasimende. Noma kunjalo, akupheleli lapho. Ngemuva kokuthi uqale ukusebenzisa uhlelo lokubalwa kwamazinyo, uqinisekile ukuthola imiphumela ngokushesha. Kodwa-ke, ngemuva kwesikhathi esithile ungazizwa sengathi usithemba ngokwanele ukuthola eminye imisebenzi engenza udokotela wamazinyo abe ngcono nakakhulu! Ukuqinisekisa ukusebenza okuphelele kohlelo lwakho lwe-accounting, udinga iqembu lohlelo olukhethekile oluzobe likulungele ukukusiza ube yi-accounting yakho lapho uyidinga. Njengoba sesishilo, ukubalwa kwezimali kuzokhokhelwa ngenxa yokubonga uhlelo lwethu lwe-accounting!